Doorashada Zimbabwe oo codadkii la dhiibtay la tirinayo – Radio Daljir
Doorashada Zimbabwe oo codadkii la dhiibtay la tirinayo
Luulyo 31, 2018 6:37 b 0
Dadka u soo baxay inay codadkooda dhiibtaan ayaa aad u sareysay iyadoo dad kabadan shan malyan oo ruux loo diiwaangeliyay inay codeyn karaan.
33 musharax ayaa u tartamaysa xilka Madaxweynaha dalka Zimbabwe iyadoo hogaamiyaha xisbiga ZANU-PF Madaxweyne Emmerson Mnangagwa oo 75 jir ah, uu si adag ula tartamayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ninka 40jirka ah Nelson Chamisa.
Doorashooyinkii hore uga dhici jirey dalka Zimbabwe ayaa waxaa hareyn jirey cabsi gelin iyo hanjabaadyo balse doorashada maanta dhacday waa ay ka duwaneyd oo waxa ay ahayd mid ku dhacday jawi nabdoon.
Waxaana markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2002dii goobjoog ka ahaa doorashadan kormeerayaal ka socday qaarada Yurub iyo Maraykanka.
Dalka Zimbabwe ayaa doorashadan maanta ay dhacday iyadoo uusanwax lug ah ku lahayn Robert Mugabe oo muddo dheer soo xukumayay dalka ku yaal Koofurta Afrika.
Madaxwayne Farmaajo oo saakay kusii jeeda Afgooye
Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo soo xiraya heshiisiinta beelo nabadayn ay uga socoto Qardho